Habka ugu fiican in la soo celiyo xogta ka bixisaa Hard Drive 2
Waa maxay bixisaa drive adag?
Bixisaa drive adag ayaa ah nooca ugu dhaqanka ee drives adag in la isticmaalay ee la soo dhaafay, laakiin wali isticmaalo qiyaasta ah mid aad u ballaaran. Waxay waxaa lagu yaqaan in ay dhaqan ahaan sida technology ay ku dul kuwaas oo ku tiirsan tahay mid jir iyo taageero waa adag tahay inay helaan. Bixisaa waxay u taagan tahay Integrated Drive Electronics ama IBM cajalid Electronics oo waxaa loo isticmaalaa sida interface caadiga ah ee dhammaan IBM ku salaysan drives, CD iyo DVD drives. In bixisaa duwan Small Computer System Interface ilaaliyaal ku yaalaan o drive kasta taas oo macnaheedu yahay in drive mid kastana gaar ah ula xariiri karaan motherboard ah. Version ayaa dambe ee bixisaa ee loo soo gaabiyo Eide ama xoojiyay bixisaa kaas oo sidoo kale ka shaqeeyaa sidii interface ka caadiga ah ee IBM ku salaysan adag drives iyo kombiyuutarada ee ku sifayn la mid ah. Marka dambe ee drive tani waxa uu ku yaalaa cable ee interface bixisaa, jumpers oo isku xira awood. Bixisaa waxaa mararka qaarkood sidoo kale loo yaqaan PATA tusaale is barbar socda Lifaaqa Technology Advanced iyo waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah oo ka badan technology cusub Sata ka mid ah oo ka mid ah ugu fiican yahay in ay bixisaa drives adag siiyaan waafaqsan ugu badan, laakiin dhinaca kale lagu kaydiyo wayn oo loo marnaba ma taageerin by technology this.
What`s farqiga u dhexeeya bixisaa drive adag iyo Sata adag?
Marka ay timaado kala ah laba farsamooyinka ugu horeysay oo hal dhibic ugu horreeyey ku soo dhaca maskaxdooda waa daah tiknolojiyada, kuwaas oo halkaas bixisaa waa wax la xiriira qoraalkii ka weyn oo ka mid ah IBM ku salaysan adag drives iyo Sata yahay technology cusub. Sata waxaa sidoo kale loo yaqaan ATA Serial ama Lifaaqa Technology Advanced Serial. Halkee bixisaa bixisaa waafaqsan ugu badnaan Sata drives adag siiyaan dadka isticmaala ee la kaydiyo waaweyn oo waa qaali. Taageero New farsamada sida safka amarka hooyo iyo deeruhu kulul waa wax bixisaa ay la'dahay halka Sata drives waa yar haboon servers iyo taageero drive kulul adag deeruhu sidoo. Heerka kala iibsiga xogta ku bixisaa uu aad u hooseeyo marka la barbar dhigo Sata ie 133 MB / s iyo Sata wareejinta xogta qiimaha kor u bixin 600 MB / s ah. Cable Xogta of bixisaa sidoo kale waa dhaqanka oo ay noqon kartaa ilaa 18 inches n dhererka, in Sata cable xogta qiyaas 3ft oo dherer ah iyo channels awooda iyo xogta yihiin spitted laba xiriir. Isticmaalka bixisaa user ku yeelan karaan wax ka badan hal drives adag ku xiran oo lagu sameeyo fiilooyinka xogta ay ku xidhan yihiin ka mid ba midka kale. Waxaa jahawareerinaya nidaamka kombiyuutarka iyo sidoo kale sabab la mid ah, waa aan awoodin in ay ogaadaan wixii la wado waa mid ka OS waa in la raran yihiin oo ay tahay oo dhan ay sabab u tahay dhaxameed. In Sata drive kasta waa la xiriiraan motherboard si toos ah iyo drive ugu muhiimsan si fudud loo hagaajin karo ka BIOS nidaamka ah.
Sidee inuu ka soo kabsado xog ka bixisaa drive adag?
Waxaa jira tobanaan kun oo barnaamijyo software in lagu heli karaa suuqa si ay u hubiyaan in dadka isticmaala ay ku qanacsan yihiin marka ay timaado bixisaa soo kabashada xogta drive adag si kastaba ha ahaatee daryeel loogu dhaqmi lahaa wile iibsigu hal sida oo dhan oo iyaga ka mid aan la mid ah oo aan marnaba ku siin isla shaqeynta ama waafaqsan yahay bixisaa drives adag. Si aad u samayso nidaamka hawl yar user barnaamijka software-ka loo adeegsaday kabashada waa in ay leeyihiin a user saaxiibtinimo interface iyo soo kabsado waa in xogta aan hayo in aragtida sida jir ay dhibaatadu tahay.
Waxaa hubaal waa yaab in loo abuuray by Wondershare ah. Marka ay timaado in soo kabashada xog-aragnimo user ee ma aha oo kaliya cabsi badan laakiin dadka isticmaala ay sidoo kale aad u badan ku qanacsanahay in arrintan la xiriira sida xogta waxaa had iyo jeer ka soo kabsaday sida ay tahay doonista iyo rabitaan. Waxaa jira laba hababka soo kabashada xogta marka ay timaado barnaamijka ie kabashada macluumaadka hab saaxir iyo soo kabashada xogta hab caadiga ah. Haddii user waa arday ka dibna waxa lagula talinayaa in ay tagaan leh hab saaxir ah sida keliya ee lagu magcaabo ayaa loo baahan yahay si ay u qabtaan hawsha. Used ayaa sare u tegi karaa hab caadiga ah sida ay u sahlanaan doonto inay raacaan.
Marka barnaamijka la soo bixi ayaa laga soo saarey si toos ah qaadan doonaa user in ay hab saaxir ah oo halkan laga sharaxi doonaa sida ay tahay mid fudud iyo inta badan isticmaala kuma casriga ah ugu xeel dheer at dhan:
Marka button xiga waxa ay riixi user waxaa haga doonta shaashada ku xigta halka uu ku jawaabay doonaa hore ka soo laba su'aalood oo macnaheedu waxa nooca file oo user a doonayo inuu ka soo kabsado in meesha ugu horeysa ee:
User ayaa markaas waxaa lagu weydiin doonaa in aad doorato meesha uu u maleeyo faylka laga yaabo in ay lunsan jirey hor intii aan la tirtiray:
Hab kabashada waxaa markaas in la soo xulay si ay u hubiyaan in files ka raadinaya bilaabmin. Waxaa xusid mudan in baaritaan qoto dheer ku qaadataa waqti ka dheer, halkaas oo sida baaritaano ay dhammaan dhinacyada xun ee drive ee adag iyo sidoo kale. Dhinaca kale dib u soo kabashada file cayriin keeni doonaa user in ay hab caadiga ah taas oo ah in ka users sare:
Marka geeddi-socodka scan qoto dheer dhamaado user awood u yeelan doonaan in ay arkaan dhammaan faylasha in la helay by barnaamijka iyo user ku hubin kartaa faylasha in la soo celiyo oo ka dhacay badhanka soo kabsado si uu u dhameystiro nidaamka:
> Resource > Hard Drive > Habka ugu fiican in la soo celiyo xog ka bixisaa Hard Drive